ရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည် ၂၇၃ ဦးပျောက်ဆုံးနေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည် ၂၇၃ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ၂၀၁၂
မောင်းတော။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်းတောမြို့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင်ထွက်ခွာသွားသော စက်လှေနှင့် ဒုက္ခသည် ၂၇၃ ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုသုတ်သင်ချေမှုန်းရေးအစီအစဉ်အရ၊ ယခုအခါအာဏာ ပိုင်များကိုယ်တိုင် ဦးစီး၍စက်လှေများစီစဉ်ပေးလျက်ရှိသည်။ မောင်းတောမြို့ နယ်စပ်ဒေသကွပ်ကွဲရေး (နစက) အင်းဒင်နယ်မြေ (၈)၊ စခန်းအမှတ် (၁၈) မှစခန်းမှူး ကျော်မျိုးထိုက်၊ ဗိုလ်မှူးဇော်ထွန်းမြင့်၊ စရဖ ဗိုလ်မှူးသန်းဝင်း၊ အင်းဒင်ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေး မှူး ဦးသန်းမြင့်တို့ဦးစီး၍ ဦးဆယတ်ဟူးစိန် (ဘ) ဦးတာ ဇူမူလုခ်နှင့် လာလူး (ဘ) ဦးအဲရှာဒုလ္လာတို့ကိုဦးဆောင်စေကာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် ၂၇၃ ဦးထံ မှ ငွေကျပ် ၇၄ သိန်းယူ၍ မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်နိုင်ရန် စက်လှေစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
နစကစခန်းမှူးနှင့်အပေါင်းအပါများမှစီစဉ်ပေးလိုက်သောစက်လှေသည် အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီး၊ ခရီး သည် ၂၇၃ ဦး အတွက်အလွန်သေးငယ်ကြောင်း မောင်းတောမြို့ဒေသခံတစ်ဦးမှ RB News သို့ပြော သည်။
“ငဂူး (ဘ) ဦးဂျမီလ်ရဲ့သားကို စက်လှေမောင်းအဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ စက်လှေကအရမ်းသေးတယ်။ မဆံ့တာကို အတင်းအဓမ္မထည့်ပေးလိုက်တာ။ စက်လှေကဟောင်း တာလည်း တော်တော်ဟောင်းနေပြီ။ ဒီနိုင်ငံကထွက်သွားရင် ပြီးရောဆိုပြီး နစကတွေလုပ်လိုက်တာ။ အခုနစကတွေက လူကုန်ကူးနေကြပြီလေ။ ၂၇၃ ယောက်လုံးလမ်းမှာ စက်လှေ မှောက်ပြီးသေ သွားကြပြီလို့ကောလဟလကြားနေရတယ်။ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းပါတယ်။ စက်လှေပေါ်မှာမ၀န်ဆောင် နိုင်တဲ့လူအင်အားတင်သွားတယ်ဆိုတော့ စိုးရိမ်ရတာ အမှန်ဘဲ။” ဟု၎င်းဒေသခံ မှပြောသည်။
ကွမ်းတောင်ကောက်ရွာနှင့်သာဝင်းချောင်းရွာတို့မှ ပဲ့ကိုင် ဦးအီဒါနှင့် ဦးဆာလေအဟမတ် တို့ဦးဆောင်၍ စက်လှေနှစ်စီး မလေးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားကြောင်းသိရသည်။ လှေစီးဒုက္ခသည် မည်မျှလိုက်ပါသွား သည်ကိုစုံစမ်းလျက်ရှိသည်။
Source : http://burmese.rohingyablogger.com/2012/12/blog-post_2449.html
This entry was posted on December 19, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ မြန်မာပြည်လာမယ်
အာဂျင်တီးနား လွှတ်တော်မှ လူနည်းစု မွတ်စလင်များ ရပိုင်ခွင့်အတွက် ဥပဒေသစ်ထုတ်ပြန်ပေး →